Linux Mint 20.2: iri pano uye iwe unogona kusimudzira kubva 20 uye 20.1 | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yeanodiwa kwazvo, ari nyore kushandisa uye akaparadzirwa kugoverwa kweGNU / Linux iLinux Mint. Iyi inozivikanwa DEB package-based projekiti ikozvino inosvika kune yayo Linux Mint 20.2 vhezheni. Kuvhurwa kunouya kwakatakura nekuvandudzwa uye dzimwe nhau dzinonakidza dzaunogona kunakidzwa kubva zvino zvichienda mberi.
Zvakare, kunyangwe iwe uchisarudza Linux Mint neCinnamon desktop nharaunda, iyo vhezheni ine MATE kana isina kureruka Xfce desktop, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kukwidziridza kubva kushanduro 20 ne20.1. Uye haina kungokurudzirwa chete nekuda kwenhau, zvakare yakanaka nekuti iri pamusoro vhezheni yeLTSndiko kuti, nerutsigiro rurefu. Icharamba ichivandudzwa kusvika 2025 sezvo ichivakirwa paUbuntu 20.04 LTS.
Nezve nhau dzeLinux Mint 20.2, izvo zvinogadziridzwa zvemapakeji izvo kugoverwa uku kunosanganisira pre-yakaiswa kumira kunze, kuti iwe ugone kunakirwa nezvazvino, pamwe nezvimwe zvakagadziriswa zviputi. Ivo vakashandisa zvakare tsinga 5.4.
Uye iyo rondedzero yenhau haina kugumira ipapo. Imwe yewedzero inoitirwawo kugadzirisa iyo kugadzirisa kuyerera muCinnamonSezvo manejimendi wekuvandudza achazogadziridzawo mamiriro enzvimbo yedesktop 'zvinonhuwira', kureva maapplet, madhesiki, madingindira uye ekuwedzera. Izvi zvichaita kuti hupenyu huve nyore kumubati kana mushandisi, nekuti zvichange zvisinganetsi uye zvinoshungurudza kune vashandisi kana zvasvika pakugadzirisa nharaunda uye kuramba uchienderana.
Chimwe chinhu chitsva ndechekuti yako yekuvandudza application ikozvino ichabatawo mapakeji Yenyika Yese Flatpak mhando. Nhanho kumberi iyo yako vashandisi inodawo. Asi pane zvimwe, zvakawanda…
Nyowani Bulky application, iyo inobata iyo mikuru kutumidzazve mazita mafaera.
Sticky Notes inotsiva GNote seye default-kutora-kutora app.
Iyo Warpinator faira yekufambisa app ikozvino inotsigira nhare mbozha.
Iyo yekuona mufananidzo ikozvino inotsigira mifananidzo mune .svgz fomati uye yayo slideshow modhi inogona kumbomiswa / kuitwazve neiyo space bar.
Mune zvinyorwa zvePDF, zvirevo izvozvi zvinoonekwa pazasi pechinyorwa uye iro gwaro rinogona kutsikirirwa pasi nebara repakati.
Iyo yemavara edhisheni inounza nyowani yekusimbisa sarudzo yemhando dzakasiyana dzechena.
Wakawedzera NVIDIA Prime applet iyo inobvumidza nyore GPU kuchinjanisa.
Iyo Nemo faira maneja ine yakavandudzwa yekutsvaga basa.
Sinamoni 5 inofanirwa kuita zvirinani, iine zvakakwana kushandisa ndangariro.
Mamwe mashoko nezve Linux Mint uye kurodha pasi - Webhusaiti yepamutemo yeprojekti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Linux Mint 20.2: Iri pano uye iwe unogona kukwidziridza kubva pa20 uye 20.1
Inosara kutaura kuti pane "Edge" vhezheni ine yazvino kernel [5.11]
Chrome haicharatidze yakachengeteka webhusaiti zviratidzo